နျူကလိယား တိုက်ရိုက် ထိမှန်ရင်တောင် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြေအောက် အရေးပေါ်ကွန်ဒို – Nyi Ma Lay
နျူကလိယား တိုက်ရိုက် ထိမှန်ရင်တောင် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြေအောက် အရေးပေါ်ကွန်ဒို
By Nyi Ma LayPosted on September 23, 2021 September 23, 2021
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းရှင် Larry Hall က ကျေးလက်ဒေသ Kansas တွင် ပိုင်ဆိုင်ထားသော မြေတွင် စစ်အေးကာလတွင် နျူးကလီယားဒုံးကျည် Atlas Missile ထားသိုသော တွင်းကြီး တစ်ခု ပါဝင်နေသည်။…
Larry Hall က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးသောအခါ မြေအောက် အရေးပေါ်ကွန်ဒိုတစ်ခုကို ဒုံးကျည်တွင်းထဲမှာ တည်ဆောက်ရန် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့သည်။ Survival Condo ဟု သူက အမည်ပေးလိုက်ပြီး လူ ၇၅ ဦးစာ ကွန်ဒိုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး တည်ဆောက်စေခဲ့သည်။….
မြေပေါ်မှာ အပျက်အစီးတွေ အကြီးအမား ဖြစ်နေပေမဲ့ ကွန်ဒိုထဲ ရောက်နေသူတွေ ဘေးမသီ ရန်ခမ နေနိုင်ရေးကို ဦးတည်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်။နေရာအတိအကျကို လုံခြုံရေးအရ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုပေမဲ့ Kansas City လေဆိပ်ကနေ ကားနဲ့ ၃ နာရီမောင်းရင် ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရှိတယ်လို့ Larry Hall က ပြောပြတယ်။…
အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လို့ ခိုလှုံမယ်ဆိုရင် အချိန်မီ အရောက်လာဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ထားရှိတယ်။Atlas missile ဒုံးကျည်တွင်းက Army Corps of Engineers တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒုံးကျည်တွင်း ၇၂ ထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။…
နျူးကလီယား တိုက်ရိုက်ထိမှန်ရင်တောင် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားတယ်။ တွင်းနက် နံရံတွေက ၉ ပေ အထူ ရှိတယ်။အီပိုဆီနဲ့ မာထားတဲ့ ကွန်ကရိသားကို သုံးထားတယ်။တွင်းပေါက်ဝ အပေါ်မှာ အမိုးခုံးရှိပြီး လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၅၀၀ ကျော်အထိ ခံနိုင်ရည် ရှိတယ်။…
တွင်းထဲမှာ လူ ၇၅ ဦး ၅ နှစ်တိုင်တိုင် နေထိုင်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပြီး ကြမ်းခင်းဧရိယာ စုစုပေါင်း ၅၄,၀၀၀ စတုရန်းပေ ရှိတယ်။Hall က ဒုံးကျည်တွင်း ရှိတဲ့မြေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဝယ်ယူခဲ့တယ်။ အစိုးရကို ကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ ပေးသွင်းရတယ်။ စီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။…
နဂို ရှိပြီးသား နံရံကို ဆက်လက်အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀ သက်သာခဲ့တဲ့အပြင် ခံနိုင်ရည်ကိုလည်း စမ်းသပ်ခံပြီးသား နံရံထူထူကို သူ ရရှိတယ်။မြန်နှုန်းမြင့် ဓာတ်လှေ ကားတစ်စီး တပ်ဆင်တယ်။ လှေကားဖြင့် တက်ဆင်းနိုင်အောင် လှေကားလည်း ထားရှိပေးထားတယ်။…
Survival Condo အထဲသို့ သွင်းတဲ့လေကို ဆန်ကာစစ်ပြီးမှ သွင်းတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ဓာတုပစ္စည်း စတာတွေ လေထဲ ပါမလာတာ သေချာအောင် စစ်ပြီး လေအသန့်ကိုပဲ သွင်းတ ယ်။ တွင်းအပေါ်ဖက်မှာ ရေ ဂါလံ ၇၅,၀၀၀ သိုလှောင်ထားတယ်။ မီးစက်လည်း ထားရှိတယ်။…
တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်း၊ ဘေးကင်းခြင်း တို့ကို စူးစိုက်ပြီး ဆောက်လုပ်ထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဇိမ်ကျကျ နေထိုင်နိုင်ရေးကိုလည်း စီမံပေးထားတယ်။ကျင်းထဲ ငါးနှစ်တိုင်တိုင် နေထိုင်မယ်ဆိုရင် သက်သော င့်သက်သာ ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။…
သံတိုင်တွေနဲ ကွန်ကရိအ လွှာတွေ တည်ဆောက် တယ်။ ထောင်လိုက်နဲ့ ရေပြင်ညီ အလွှာအကန့်တွေ တည်ဆော က်တယ်။သံတိုင် တန်ချိန် ၆၀၀ ကျော် သုံးစွဲပြီး တောင့် တင်းအောင် အားဖြည့်တင်းပေးထားတယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ကုန်ကျခဲ့တယ်။…
အခုခေတ်ဈေးနဲ့ဆိုရင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ကျော် ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဒိုကို ဈေးဖွင့် ရောင်းချတဲ့အခါ အထပ်တစ်ထပ်လုံးအနေဖြင့် ရောင်းချပြီး ကြ မ်းခင်းဧရိယာ ၁၈၂၀ စတုရန်းပေ နီးပါး ရရှိပြီး ဈေးနှုန်းက အမေရိက န်ဒေါ်လာ ၃ သန်း ဖြစ်ပါတယ်။…
ကွန်ဒိုမှာ မိသားစု ခိုလှုံနေထို င်တဲ့အခါ စားစရာ၊ ရေ အစရှိတာတွေကို စီစဉ်ပေးထားတယ်။အဝင်တံခါးမကြီးက ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်။အဝင်လမ်းနံရံတွေမှာ ကြွေပြားတွေ ကပ်ပေးထားတယ်။ မှောင်တော င်တောင် အရသာ မခံစားရအောင် ဖြူဆွတ်နေတဲ့ ကြွေပြားအရောင်ကို သုံးပေးထားတယ်။…
အခင်းအကျင်းကို ရွေးစရာ နှစ်မျိုး ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးထားတယ်။ တစ်ထပ်မှာ မိသားစု ၆ မှ ၁၀ ဦးအထိ နေထိုင်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ တစ်ခြမ်းစီ ခွဲပြီး နှစ်ခြမ်း ထားပေးရင်တော့ တစ်ခြမ်းမှာ ၃ မှ ၅ ဦးအထိ နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ ပရိ ဘောဂ အသုံးအဆော င်တွေကတော့ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
ပြတင်းပေါ က်တွေကို ရှုခင်းတစ်ခု ပြတင်းပေါက်မှ လှမ်းမြင်ရတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးထားပြီး တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်အခါနဲ့အညီ အလင်းအမှောင် ပြောင်းပေးတယ်။ရေကူးကန်၊ သေနတ်ပစ်ခန်းတွေလည်း ပါတယ်။အပန်း ဖြေ ကစားဖို့ ခန်းမလည်း ပါတယ်။…
အစည်းအဝေး ခန်းမ၊ ဘား၊ ရုပ်ရှင်ခန်းမ တို့လည်း ပါဝင်တယ်။ သင်တန်းခန်းမ တစ်ခု ပါတယ်။ ဟင်းရွက် လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် စားနိုင်ဖို့ စိုက်ခင်း ခန်းမကို ထည့်သွင်းတည်ေ ဆာက်ပေးထားတယ်။ ကွန်ဒို အခန်းတွေမှာ ပရိဘောဂေ တွ အသင့် ထားရှိပေးထားတယ်။…
အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္ Larry Hall က ေက်းလက္ေဒသ Kansas တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေျမတြင္ စစ္ေအးကာလတြင္ န်ဴးကလီယားဒုံးက်ည္ Atlas Missile ထားသိုေသာ တြင္းႀကီး တစ္ခု ပါဝင္ေနသည္။…
Larry Hall က ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီးေသာအခါ ေျမေအာက္ အေရးေပၚကြန္ဒိုတစ္ခုကို ဒုံးက်ည္တြင္းထဲမွာ တည္ေဆာက္ရန္ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့သည္။ Survival Condo ဟု သူက အမည္ေပးလိုက္ၿပီး လူ ၇၅ ဦးစာ ကြန္ဒိုကို ဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။….
ေျမေပၚမွာ အပ်က္အစီးေတြ အႀကီးအမား ျဖစ္ေနေပမဲ့ ကြန္ဒိုထဲ ေရာက္ေနသူေတြ ေဘးမသီ ရန္ခမ ေနနိုင္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ဒီဇိုင္းထုတ္ထားတယ္။ေနရာအတိအက်ကိဳ လုံၿခဳံေရးအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳေပမဲ့ Kansas City ေလဆိပ္ကေန ကားနဲ႕ ၃ နာရီေမာင္းရင္ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ရွိတယ္လို႔ Larry Hall က ေျပာျပတယ္။…
အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္လို႔ ခိုလႈံမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မီ အေရာက္လာဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိတယ္။Atlas missile ဒုံးက်ည္တြင္းက Army Corps of Engineers တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဒုံးက်ည္တြင္း ၇၂ ထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။…
န်ဴးကလီယား တိုက္ရိုက္ထိမွန္ရင္ေတာင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ တြင္းနက္ နံရံေတြက ၉ ေပ အထူ ရွိတယ္။အီပိုဆီနဲ႕ မာထားတဲ့ ကြန္ကရိသားကို သုံးထားတယ္။တြင္းေပါက္ဝ အေပၚမွာ အမိုးခုံးရွိၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ခံနိုင္ရည္ ရွိတယ္။…
တြင္းထဲမွာ လူ ၇၅ ဦး ၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္နိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားၿပီး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စုစုေပါင္း ၅၄,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိတယ္။Hall က ဒုံးက်ည္တြင္း ရွိတဲ့ေျမကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဝယ္ယူခဲ့တယ္။ အစိုးရကို ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀,၀၀၀ ေပးသြင္းရတယ္။ စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံတယ္။…
နဂို ရွိၿပီးသား နံရံကို ဆက္လက္အသုံးျပဳတဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ သက္သာခဲ့တဲ့အျပင္ ခံနိုင္ရည္ကိုလည္း စမ္းသပ္ခံၿပီးသား နံရံထူထူကို သူ ရရွိတယ္။ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဓာတ္ေလွ ကားတစ္စီး တပ္ဆင္တယ္။ ေလွကားျဖင့္ တက္ဆင္းနိုင္ေအာင္ ေလွကားလည္း ထားရွိေပးထားတယ္။…
Survival Condo အထဲသို႔ သြင္းတဲ့ေလကို ဆန္ကာစစ္ၿပီးမွ သြင္းတယ္။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္၊ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဘက္တီးရီးယား၊ ဓာတုပစၥည္း စတာေတြ ေလထဲ ပါမလာတာ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ၿပီး ေလအသန႔္ကိုပဲ သြင္းတ ယ္။ တြင္းအေပၚဖက္မွာ ေရ ဂါလံ ၇၅,၀၀၀ သိုေလွာင္ထားတယ္။ မီးစက္လည္း ထားရွိတယ္။…
ေတာင့္တင္းခိုင္မာျခင္း၊ ေဘးကင္းျခင္း တို႔ကို စူးစိုက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားတယ္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဇိမ္က်က် ေနထိုင္နိုင္ေရးကိုလည္း စီမံေပးထားတယ္။က်င္းထဲ ငါးႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ သက္ေသာ င့္သက္သာ ရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။…
သံတိုင္ေတြနဲ ကြန္ကရိအ လႊာေတြ တည္ေဆာက္ တယ္။ ေထာင္လိုက္နဲ႕ ေရျပင္ညီ အလႊာအကန႔္ေတြ တည္ေဆာ က္တယ္။သံတိုင္ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲၿပီး ေတာင့္ တင္းေအာင္ အားျဖည့္တင္းေပးထားတယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ကုန္က်ခဲ့တယ္။…
အခုေခတ္ေဈးနဲ႕ဆိုရင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကြန္ဒိုကို ေဈးဖြင့္ ေရာင္းခ်တဲ့အခါ အထပ္တစ္ထပ္လုံးအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ၾက မ္းခင္းဧရိယာ ၁၈၂၀ စတုရန္းေပ နီးပါး ရရွိၿပီး ေဈးႏႈန္းက အေမရိက န္ေဒၚလာ ၃ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။…
ကြန္ဒိုမွာ မိသားစု ခိုလႈံေနထို င္တဲ့အခါ စားစရာ၊ ေရ အစရွိတာေတြကို စီစဥ္ေပးထားတယ္။အဝင္တံခါးမႀကီးက ျပင္းထန္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္တယ္။အဝင္လမ္းနံရံေတြမွာ ေႂကြျပားေတြ ကပ္ေပးထားတယ္။ ေမွာင္ေတာ င္ေတာင္ အရသာ မခံစားရေအာင္ ျဖဴဆြတ္ေနတဲ့ ေႂကြျပားအေရာင္ကို သုံးေပးထားတယ္။…
အခင္းအက်င္းကို ေ႐ြးစရာ ႏွစ္မ်ိဳး ဒီဇိုင္းထုတ္ေပးထားတယ္။ တစ္ထပ္မွာ မိသားစု ၆ မွ ၁၀ ဦးအထိ ေနထိုင္နိုင္တယ္။ တကယ္လို႔ တစ္ျခမ္းစီ ခြဲၿပီး ႏွစ္ျခမ္း ထားေပးရင္ေတာ့ တစ္ျခမ္းမွာ ၃ မွ ၅ ဦးအထိ ေနထိုင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထဲမွာ ထည့္ေပးထားတဲ့ ပရိ ေဘာဂ အသုံးအေဆာ င္ေတြကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။…
ျပတင္းေပါ က္ေတြကို ရႈခင္းတစ္ခု ျပတင္းေပါက္မွ လွမ္းျမင္ရတဲ့ အတိုင္း လုပ္ေပးထားၿပီး တစ္ေန႕တာရဲ႕ အခ်ိန္အခါနဲ႕အညီ အလင္းအေမွာင္ ေျပာင္းေပးတယ္။ေရကူးကန္၊ ေသနတ္ပစ္ခန္းေတြလည္း ပါတယ္။အပန္း ေျဖ ကစားဖို႔ ခန္းမလည္း ပါတယ္။…
အစည္းအေဝး ခန္းမ၊ ဘား၊ ႐ုပ္ရွင္ခန္းမ တို႔လည္း ပါဝင္တယ္။ သင္တန္းခန္းမ တစ္ခု ပါတယ္။ ဟင္း႐ြက္ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ စားနိုင္ဖို႔ စိုက္ခင္း ခန္းမကို ထည့္သြင္းတည္ေ ဆာက္ေပးထားတယ္။ ကြန္ဒို အခန္းေတြမွာ ပရိေဘာဂေ တြ အသင့္ ထားရွိေပးထားတယ္။…
Previous post ငယ်ငယ်တုန်းက ပြောပြောနေကြတဲ့ လက်ပြတ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next post ရေဘဝဲ၊ ကြယ်ငါး၊ ပုဇွန်၊ ခရု အစရှိတဲ့ အကောင်မျိုးစုံပါလာတဲ့ ပင်လယ်စာမိုးကြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း ရွာသွန်း ခဲ့တဲ့ မြို့လေး